लकडाउन : पहाडी जीवनमा रमाउने अवसर
लकडाउन हुने सम्भावना देख्नेबित्तिकै म आफ्ना पोका पुन्तुरा बाँधेर लमजुङको सुन्दर आफ्नो जन्मभूमि भोर्लेटारको लागि गाडी चढेँ । धेरै समय भएको थियो काठमाडौंको धुवाँ धुलो र उकुसमुकुसबाट जीवन उम्किन नसकेको । सधैंको व्यस्तता र भागढौडले जन्मभूमि सम्झिने फुर्सद पनि थिएन । अहिले विश्व कोरोनाले आक्रान्त भइरहँदा म भने प्रकृतिको काखमा रमाइरहेको छु । लगभग दुई महिना भयो मोबाइल, ल्याप्टप र टिभीको दुनियाँबाट अलि पर पहाडी जीवनको भोग गरिरहेको छु।
आहा ! यो प्रकृति, मसँगै तालमा ताल मिलाएर सँगै नाचेजस्तो । लकडाउनले मानिस घरमै थुनिँदा प्रकृति भने मुसुमुसु हाँसे जस्तो भइरहेको छ । यही पहाडको काँधमा हुर्किएको म, जिन्दगीको मिठो गीत सम्झिएर अचेल यस्तै मोहनीमा गुन्गुनाइरहेको छु । सम्झनालाई संगीतमय बनाइरहेको छु अनि मनमनै सोचिरहेको छु- यो लकडाउन त स्वयं म र प्रकृतिका लागि वरदान स्वरुप भएको छ आजकल ।
पहिलेपहिले भोर्लेटार बजारमा केही थान बस्ती र खेतीपाती योग्य जमिनहरू थिए । अहिले अलि व्यापारिक केन्द्र बन्दै छ । तै पनि पिस्ती र मिदिम खोलाको बीचमा रहेर भोर्लेटारले सधैं आडैमा रहेको जंगलको चिसो हावा भने खाइरहेको हुन्छ । खै ! यो बाल्यकालको हुटहुटी हो कि मेरो अन्तरमनको चाहना । अहिले मलाई मनुष्य नभएर चरीझैं रनवन डुल्ने र लेकबेसी गर्ने इच्छा जागेको छ।
घरबारीमा फलेका अनेकौं तरकारीको स्वाद लिदै वनमा काफल र ऐसेलु टिप्न हप्तै बिच्छे जाने पनि गरेको छु । अचम्म त पहिले सानो हुँदाको स्मरणले गराउने गरेको छ । वनका पाखाहरूमा पानी अमला, निउँरो खोज्दै धेरै हिँडिन्थ्यो । अनि जुकाले पनि निकै सताउँथ्यो । अहिले तिनै दिनहरूको पुनरावृत्ति भएको छ । वैशाख र जेठमा समेत परेको झरीले बर्खायामको याद दिलाएको छ । निउँरोले उम्रिन बिर्सिएको छैन । कोइलीले मिठासपूर्ण स्वरमा रनवन घन्काउँदैछ ।
घाम चर्किँदा, घरमा बस्न दिक्दार लाग्दा, खोला झर्ने बाटैमा एउटा ठूलो वरपिपलको चौतारो छ । त्यहीँ गएर शीतल ताप्छु । ढुंगाले बारेर बाटुलो पिँढी उठाएको यो मनमोहक चौतारीको छहारीमा पहिलेपहिले वनबाट भारी बोकी आउने भरियाहरू र गाई हेर्न खोला झर्ने गोठालाहरू विश्राम गर्थे।
खाजा खान स्कुलले दिएको बिदामा लुकामारी खेल्ने त्यो ठाउँ, गाउँखाने कथा सुनाउँदाका साक्षी र कहिलेकाहीँ नाच गान गर्दाको त्यो अविस्मरणीय क्षणको साक्षी थियो चौतारी । जुन अचेल सुनसान बनेर बसिरहेको छ ।
मान्छेहरूले घरघरमै पङ्खा र एसी जडान गरिसके । हिजोआज पहिलेझैं भारी बोक्नु पर्दैन, वनमै सडक पुगिसक्यो। पिस्ती खोला झर्ने बाटैमा एउटा सानो कुवा पनि थियो । लकडाउनको समयमा कुवाको पानी चाखौं भनेर म त्यता पनि लागें । कुवा पहिले जस्तो व्यवस्थित थिएन । तर, पानी रसाउन छोडेको थिएन । एक हात जति गहिरो कुवाको पानी निर्मल छ अझै पनि ।
पहिले पहिले यहाँ बिहान तातोपानी रसाउ’थ्यो । गर्मीयाममा खोलामा पौडी खेल्दै नुहाउने हामी जाडोयाम भएपछि कुवामा नुहाउन तछाडमछाड गर्थ्यौं । एकैछिन पिस्ती खोलाको झोलुङ्गे पुलमा पनि एक्लै मच्चिए । पहिलेपहिले एकले अर्कालाई डर पैदा गर्न हामी बीच मच्चाउने होडबाजी हुन्थ्यो।
यही लकडाउनकै मौका छोपी पारि ईशानेश्वर महादेव मन्दिरको पनि दर्शन गर्न गएँ । विश्वास, श्रद्धा, भक्ति र सनातन रीतिथितिमा चलेको छ यो समाज । शिवरात्रिको दिन यहाँ ठूलो मेला लाग्छ । हामी सानो हुँदा साथीभाइ जम्मा भएर दर्शनसँगै मेला हेर्न जान्थ्यौं।
विभिन्न खेलहरूमा रमाउथ्यौं अनि रातिको झिलिमिली र ठाडो बत्ती बाल्नेहरूको लर्को हेर्थ्यौं । पहिलेभन्दा अहिले अलिकति मन्दिर व्यवस्थित भएको पाएँ । मादी मिदिमको संगम बुढा महादेवको थान पनि पुगेँ ।
जीवनलाई थप अभिप्रायशील बनाउन, मानिसले विगतको सम्झना गर्नुपर्छ । फिल्मका पर्दामा देखिने फ्ल्यासब्याकजस्तै बेला सानो छँदा मैले कखरा सिकेका कालोपाटीहरू, रमाउन निस्किएका बेलघारीहरू अनि चुंगी र गुच्चा खेलेका आँगनहरू अहिले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाहरूले दर्शन गर्ने मौका पाएको छु । ठूलो बन्ने सपना देख्ने ती कक्षा कोठाहरू, झुण्डिएर पिङ खेल्ने रुखका हाँगाहरू, गृहकार्य नगर्दा घुँडा टेकेर सजाय भोगेका स्कुलका चौरहरू, सबैसबै आँखाले नअघाउन्जेल हेर्ने अवसर जुटाइदिएको छ लकडाउनले ।
धेरैलाई लकडाउन एउटा बाध्यता भए तापनि मेरा लागि यो समय अवसर भएर आएको छ । विगतलाई ताजा बनाउने अनेकौं समाजका घटनाक्रमसँग निकट रहेर बिताइरहेको छु । रहस्यमयी छ प्रकृतिको देन । यसभित्रै रमाइरहेछु ।
बन्दाबन्दीको यो समय धेरैका लागि अन्धकार र चुनौतीपूर्ण बनिरहेछ भने जीवनको उज्यालो भेट्टाउने आशामा हरेक पल जिन्दगी जिउनुको मूल्य खोजिरहेछु । हामीभित्रै एउटा चित्रकार स्थापित छ । जो मानवहृदयको क्यानभासमा प्रकृतिको मिठास भर्छ । कतिले भेट्टाउछन् त कतिले खोज्ने आँट नै गर्दैनन् ।
पहिलेपहिले घरको बार्दली स्वर्ग समान लाग्थ्यो । गुन्द्रीमा बसेर घण्टौ गौथलीको गुडलाई टोलाएर हेरिरहन्थेँ । आँगनमा परेवाहरू चारा खाएको हेरिरहन्थेँ । किताब अगाडि भए पनि ध्यान त अन्त कतै हुन्थ्यो । कहिलेचाहिँ आमाले भान्छाबाट खाना खान बोलाउनु हुन्छ भनि कुरिरहन्थें । अचेल लकडाउनको बेलामा पनि म एक्लै बार्दलीमा बसी पानी परेको हेरेर टोलाइरहन्छु।
सायद त्यो आदतले अझै विश्राम लिएको छैन । परेवा नहोलान् आँगनमा, गौथली नहोलान् गुडहरूमा । तर, मैले ती सम्झनाहरूमा बाँच्न सिकेको छु । घरमा महाभारत, रामायण र गीताका किताबहरू छन् । पानाहरू जति पल्टाउँदै जान्छु सानो हुँदा मैले ढोगेर राखेका पाँच रुपैयाका नोटहरू भेट्टाउँछु । अचेल जस्तो ज्ञानको हुटहुटी त्यतिबेला थिएन् । भगवान कृष्ण र राम जस्तै बन्ने अभिलाषा मात्र थियो । आज आएर तिनै बलवान र रोलमोडेल भनिएका चरित्रमाथि पनि आफैँले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने क्षणमा आइसकेको छु । समयको जादु हेर्दा पनि तीनछक पर्छु ।
गाँउघर सुनसान हुँदै गइरहेको छ । तर, क्षणिक भए पनि कोरोनाको त्रासले सहर केन्द्रित भएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरूलाई गाँउमा नै टिकाइराख्न कृषिजन्य उद्यम र रोजगारीमा स्थानीय एवं संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ
पहिले-पहिले आमाले काहीँ लडेर कम्मर दुख्दा, झाडावान्ता हुँदा, ज्वरो आउँदा खोलाको भूत लागेको आरोपमा मन्त्र फुक्न झारफुक गर्न, धामी झाँक्रीकोमा लानुहुन्थ्यो । सायद केही दिनपछि निको पनि हुन्थ्यो । ती दिनहरू कल्पना गर्दा र अहिले एउटा चिकित्सक बनिसक्दा आफैँ आश्चर्य चकित हुन्छु ।
मलाई फुक्ने धामी बुबाहरू त हुनुहुन्न अहिले तर ती चलन र मानवविश्वासहरू कसरी त्यति धेरै प्रभावकारी थिए त भन्नेमा म अझैं सोचमग्न रहन्छु । हाम्रो वैदिक सभ्यता र आधुनिक वैज्ञानिक युगको सेतु स्थापना गर्न र मानसिक क्रियाहरूद्वारा चामत्कारिक रुप दिन धामी गुरुहरू सक्षम थिए भन्नेमा म विश्वस्त हुन सक्छु।
उबेलामा आमाले घरमै बुनेका टोपी, गलबन्दी, सुइटरहरू हेर्दै लकडाउनलाई अझ स्मरणीय बनाउन खोजिरहेको छु । घरायसी काममा नै साह्रै व्यस्त हुने मेरी आमाले यस्तो सिप कहाँबाट सिकिन् होला ? चारहात लामो पटुका लाएर खोलाबाट पानी ओसार्ने मेरी आमा साँच्चै नै सन्तानका लागि नौलो आविष्कार गर्न वैज्ञानिक नै रहिछिन् । भैँसीको गोठ घरभन्दा टाढा राख्ने ज्ञान मेरा बुबालाई कस्ले दियो होला ? टौवाको खाँबो आजसम्म पनि दरिलो उभिएको छ ।
घर वरिपरि पातला ढुंगाका आँगन रचिएको छ । घरका झ्यालहरू बुट्टेदार छन् । ओछ्याउने चकटी र गुन्द्रीहरू पनि झनै कलात्मक छन् । मदानी, ठेकी, पिर्काहरू उस्तै आकर्षक छन् । साँच्चै यी सबै सामग्रीका निर्माणकर्ताहरू कति आविष्कारक थिए । अहिलेका महावीर पुनभन्दा कम थिए होलान् र ? म सोचमग्न हुन्छु ।
पहिलेपहिले घरकै दूध, मोही, घिउ, सातु खाएर दुब्ला ख्याउटे बच्चाबच्ची कसैका हुन्थेनन् । लकडाउनको बेला पुरानो फोटाका एल्बम हेर्दा म पनि धेरै मोटो रहेछु । यो सोचेरै आफैँ छक्क पर्छु । अचेल देखिने बच्चाबच्चीहरू चाउचाउ र कुर्कुरे खाएर हुर्किन्छन् अनि कुपोषणको शिकार हुन्छन्।
यो कोरोनाको प्रकोपले कति भोकमरीको सिर्जना हुने हो अझै आकलन छैन । जहाँ जुन खेती हुन्छ जस्तै पाखोमा कोदो, फापर, मकै रोप्ने अनि नहर चलेका खेतमा धान रोप्न सके र कृषकलाई मोल बिउमा अनुदान दिन सके यो पेसा आकर्षणमय हुन्थ्यो । अनि देशको खाद्य संकट पनि टर्थ्यो । त्यससँगै स्वस्थ अनि पोषिलो खानपानको समेत बानी बस्थ्यो।
भोर्लेटार बजार, पहिलेपहिले वरपरका गामबेँसीहरूका लागि तेल कपडा नुन किनमेल गर्ने केन्द्र थियो । अहिले नगरपालिकाको अवधारणामा सहर हुँदै गइरहेको छ ।
अचेल यहाँका मानिसहरुलाई कामबाट फुर्सद मिलेपछि पिँढीमा बसेर गफिने फुर्सद पनि छैन । न त घरका स्त्रीहरूलाई कुचो बढार्ने, बिस्कुन सुकाउने, जाँतो पिँध्ने, भकारो सोहोर्ने, पँधेरीमा गएर पानी ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ । अचेल डोकोभरि घाँस काटेर गाईबस्तुलाई खुवाउनु पनि पर्दैन।
त्यसैले मान्छेहरू सहरीया हुँदैछन् र गाउँ परिवेश सुनसान बन्दै गइरहेको छ । न कसैका घरका छानामाथि फर्सी पाकेर पहेलिन्छ, न त रातो माटोले घर पोतिन्छ । न ढुंगाले छाएका घर नै भेटिन्छन् । न कोसैका खेतमा अन्नबाली उब्जिएका छन्, न कसैको बगैंचामा केरा, आँप, सुन्तला र लिचीका बोटहरू पाइन्छन् । न त फलफूल र काँक्रा चोर्न जाने केटाकेटी नै गाँउमा छन् ।
गाँउघर सुनसान हुँदै गइरहेको छ । तर, क्षणिक भए पनि कोरोनाको त्रासले सहर केन्द्रित भएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरूलाई गाँउमा नै टिकाइराख्न कृषिजन्य उद्यम र रोजगारीमा स्थानीय एवं संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ।
Worldwide coronavirus cases cross 5.93 million, death toll over 364,000
स्वास्थ्यको निश्कर्ष : यही मोडलको लकडाउनलाई निरन्तरता दिन हुन्न
बारामा थपिए तीन जना कोरोना संक्रमित
NCP secretariat meeting decides to halt MCC activities until ratified by Parliament
कैलालीमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते
पाइलटमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि मस्को नपुग्दै फर्कियो एयर इण्डियाको विमान
१० अर्ब कमाउने प्राधिकरणलाई बजेटमा घोषित सहुलियतले थप्यो १२ अर्बको भार
प्रसूती गराउँदा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमाको मृत्यु
पर्सामा चट्याङबाट बच्न भागेका एक व्यक्तिको लडेर मृत्यु
बजेटको अनुसूचीबाट एमसीसी नहट्ने, एमसीएका काम भने रोकिने
खानेपानीमा विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा, केयूकेएलको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने
मजदुरलाई घर पुर्याउन १८ घन्टासम्म काम गर्छन् सोनु
दाङमा युवा मृत फेला, हत्या आशंका
भरतपुर–७ मा साइकल लेनसहितको सडक बन्ने
दीपकले सार्वजनिक गरे कोरोनासम्बन्धी चेतनामुलक गीत
वीपीमा भर्ना भए रातभर गाडीमा बसेका २७ सं‌क्रमित
सरिताको ‘देशै रोयो’
Standard Chartered donates Rs 5.8m to Pasang Lhamu Mountaineering Foundation for COVID-19 support
केटाकेटीहरूमा 'डिजिटल एडिक्सन' बढ्ने खतरा छ
पर्सामा थप दुई जनामा कोरोना
स्वदेशमै बसेर सेवा राष्ट्रमै गर्छु
एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नहुञ्जेल त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने नेकपाको निर्णय
मामुबाबालाई मद्दत गरिरहेको छु
परिवारबाट टाढा हुँदा नरमाइलो हुँदो रहेछ
कार्यालयमै बेहोस भएका प्रहरी प्रभाग लुभूका इन्चार्जको उपचारका क्रममा मृत्यु
महिनावारी : अझै पनि लाज?
लकडाउन प्रदूषण कम गर्न सकारात्मक भएको छ
Nepali Congress to hold CWC meeting this afternoon
रेडजोनमा भय मिश्रित ७२ घण्टा
पढेर मात्र हुन्न हजुर, अब किसान बन्नुपर्छ
घरैबाट जारी राखौं बाग्मती सफाइ अभियान
रक्सीले मात्तिएका युवकले काटेर फ्याँके आफ्नै यौनांग
भोलि म कहाँ हुन्छु ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण : एक वर्षमा ५९ जनाले मात्रै उपयोग गरे
रुकुम र देवदहका घटनामा राष्ट्रसंघको चासो, स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आग्रह
भारतबाट दैलेख आएका थप १४ जनामा कोरोना पुष्टि, कर्णालीमा संक्रमित ६० पुगे
Tenure of Bal Mandir probe panel extended
राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती सर्टिफिकेट, हामी कता जाँदैछौँ ?
Bajura quarantine facilities inashambles, sans health workers
कोरोनापछिको आर्थिक संकटलाई चिर्न असमर्थ बजेट
ला लिगा ११ जुनदेखि हुने पक्का
Police fire in the air to save health workers
बजेटमा स्थानीय तहको प्रतिक्रिया– तुच्छ बजेटले निरन्तरता पायो
लिग लिगा जुन ११ बाट सुचारू हुने, अर्को सिजन सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि